Siyaasiyiin Dhaliilay Wasiirka Gaashaandhiga Somaliland Oo Xabsiga La Dhigay – Heemaal News Network
Siyaasiga madaxa banaan ee Farxaan Maxmed Yuusuf iyo Agaasimaha Tv-ga Bada cas24 ayay maanta ciidamada amniga ee Hargaysa xabsiga dhigeen kadib markii uu loo soo gudbiyay dacwad ka dhan ah xarunta CID-da.
Ma jiraan wax war ah oo faahfaahinaya xadhiga siyaasiyiintan reer Salal oo Hargaysa ka soo baxay, waxase ay warar xog ogaal ah sheegayaan in uu Xadhigooda ka dambeeyo Wasiirka Gaashaan-dhiga Somaliland Cabdiqani Maxamuud Caateeye.
Wararka ayaa waxay intan ku daraan in loo badinayo in Wasiir Cabdiqani uu dhibsaday hadal jawaab u ekaa oo ka soo yeeray siyaasi Farxaan iyo waxgarad kale kaas lagu dhaliilayay Wasiirka Gaashaandhiga, raali galina lagu siiyay Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliland oo Wasiir Cabdiqani dhaliilo u soo jeediyay, taasna ay sababtay xadhiga siyaasiyiintan xidhan.
Ilaa hada ciidamada Amnigu kama hadal xadhiga siyaasiyiintan, balse ilo wareedyo ay shabakadu heshay ayaa ka marag kacaya in aanan sifo sharci ah loo marin xariga siyaasiyiintan maanta la xiray.
Shabakada ayaa isku dayday inay la xidhiidho Wasiirka Gaashaandhiga Somaliland si ay wax uga waydiiso xadhiga siyaasiyiintan ay isku haybta yihiin, balse isku dayadaas oo dhan ayaa guuldaraystay.
Halkan ka Daawo Siyaasiyiinta Dhaliilay Wasiirka Gaashaan0dhiga Ee la Maanta la Xiray